Taxanaha 860SL Swinging Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Taxanaha 860SL Swinging Dragon® Dredge waa jaranjarada lulid isku dhafan iyo qashin qubka jaranjarada caadiga ah oo awood u leh inay gaaraan moolka hoose ilaa 30 ′ (9.1 m) Habka sallaan lulid ee waara ee u sahlaya hawlgalka qulqulka qulqulka ama kanaalada. Sidoo kale, 860SL wuxuu ku habboon yahay inta badan macdanta, ciidda iyo quruuruxa, ka saarista qashinka dhulka hoostiisa mara, iyo socod dhexdhexaad ah, iyo mashaariicda dayactirka marinnada biyaha.
Doomaha la qaadan karo way fududahay in la isku soo uruuriyo dadaal yar goobta.
Mashiino si buuxda uxiran ayaa bixiya difaac iyo qol ku filan dayactirka joogtada ah.
Habka qoditaanka caadiga ahi wuxuu u oggolaanayaa ballacyada ballaadhan ee goynta saxda ah iyo wax soo saar wax ku ool ah.
Cabbirka siidaynta: 14 ”x 14” (350 mm x 350 mm)
Qalabka Mashiinka Weyn ee C-32: 800 HP (596 kW)
Qoto Dheerida Ugu Badan: 30 ′ (9.1 m)
Waalka gargaarka nuugista.
Barroosinka ayaa soo kiciyey.
Nidaamka meelaynta qallalan
Nidaamka xakamaynta dabka qaybta injiinka.
Fursado dheeraad ah ayaa la heli karaa marka la codsado.